घरमा झगडा भइरहन्छ ? यस्तो हुनसक्छ कारण, जान्नुहोस् यसका उपायका बारेमा ! « गोर्खाली खबर डटकम
शुक्लपक्षको पहिलो मंगलवार नीलो धागोमा अभिमंत्रित अस्वगन्धको जरा लगाएर केतु ग्रहको अशुभ प्रभाव कम गर्न सकिन्छ।
केतु ग्रहको शान्तिका लागि तिल, कालो फूल, कालो कपडा, उडुको कालो दाल, फलाम, कालो छाता आदि दान गर्न सकिन्छ। यसो गर्नाले लाभ मिल्नेछ।